SMMS panze motokari pabutiro - China J uye K repair chishongedzo
chengetedzo tired pabutiro
SMMS Outdoor motokari pechifukidziro
Boat fenda pabutiro 2
Multi rukoko asiri rakarukwa kuchiitwa uye zvakanaka; 1.Outdoor zvose ekunze ezvinhu motokari viomak. 2.With dustproof zvakanaka, breathableability uyewo zvakanaka isapinda kugona. 3.In wachena kana dema kana wachena ruvara Unosarudza 4.With mberi uye neshure kwakavharwa nenyama mupendero kubata pechifukidziro pamusoro motokari. 5.With miviri stiches kunowedzera musono 6.cost siyana: Usd15 to23.0 Material Info: Material vaizova 3% UV angent kuti kuchengeta zvinhu upenyu hurefu, zvinhu chingava kubva 130 GSM kuti 160gsm sezvo uchida, zvakawanda rinorema zvikuru Du ...
Port: Ningbo kana Shanghai
Multi rukoko asiri dzakarukwa kuchiitwa uye zvakanaka:
1.Outdoor zvose ekunze ezvinhu motokari viomak.
2.With dustproof zvakanaka, breathableability uyewo zvakanaka isapinda kugona.
3.In wachena kana dema kana wachena ruvara uchida
4.With mberi uye neshure kwakavharwa nenyama mupendero kubata pechifukidziro pamusoro motokari.
5.With miviri stiches kunowedzera musono
6.cost siyana: Usd15 to23.0
Material vaizova 3% UV angent kuti kuchengeta upenyu zvinhu refu, zvinhu chingava kubva 130 GSM kuti 160gsm sezvo uchida, zvakawanda rinorema Kunogara, uye anodhura.
Chimiro uye kukura pechifukidziro
We zvinopa waifarirwa customizing vose nemifananidzo, sezvo mugadziri, munogamuchirwa nechokwadi uye kuzviisa pasi zvaunoda, tichava nenguva mabasa ako nguva dzose.
Shanda nesu, tichaburuka kusangana requirment yako kuti Sedan, SUV, Van, RV uye vamwe uri kutarisira.
Sei kushandisa motokari cover- kudzivirira isiri yako, asi nyika-shoma Washing motokari yako.
Car pabutiro chingava dustproof, isapinda, uye kuvenga UV, kuti uchengete motokari yako kubva muguruva, shiri uye muti nhoko uyewo hazord mvura kudzivirira pendi motokari yacho, kudzivirira menyika motokari, akadai nokuputsanya puranga, chigaro pechifukidziro .
Ramba mbavha kure, dzimwe nguva, yako valueable zvinhu pamwe kudzivirirwa zvakare pasina kuva dzawaona nyore nokuti chifukidziro kuvanzira motokari yako.
Ponesai nyika shoma nguva achigeza motokari yako.
J uye K Auto chishongedzo ndiye mugadziri mumutsara kubva 2009, akashanda zvikuru motokari pabutiro fekitari mungarava uye imupota uye chishongedzo munyengeri muareka kubva America kuEurope, zvinopa yeGmail.END_STRONG nenyanzvi mabasa kubva zvigadzirwa pacharo kuchinjanisa minamato.
Partner nokusingaperi uye vachiri kushanda: Ferrari, Coverking, Polo Motor, DS nekufukidza, 3 Lines, UKCC, Sparco etc.
Tarisira Uchava inotevera kwedu pasi.
Previous: chete rukoko pamukova
Next: 600D PP donje Ichitsigirwa chigaro pechifukidziro
Auto redhiyeta Cover
kanopi Nursing Cover
Car fenda Cover
Kwakavharwa nenyama Cloth Cover
Kushata Car Cover
dzakarukwa Fabric Car Cover
Moto Chigaro Cover
PVC Guruva Cover
Rain nemishonga Protection Cover
Sikuta Body Cover
Sikuta makumbo anoonekwa Cover
Divi View Mirror Cover
Chinja Housing Cover
Njenjemera Plastic Cover
Njenjemera PVC Cover
Waterproof sikuta Cover
Rakarukwa Fabric Rv Wheel Cover
Single rukoko Nonwoven Indoor
Silver murindi 300D Outdoor
chete rukoko pamukova
Silver murindi 150D